Mmiri kefir | Nutri Nri
Kefir bụ nri siri ike ma mana n'otu oge ahụ ọ na-esiri ike inweta ma ọ ga-eme kefir mmiri ma ọ bụ mmiri ara ehi, ụdị kefir abụọ dị adị.
Kefir nwere probiotic Njirimara Ọ na-adọrọ mmasị maka ahụ, ọ chọrọ nkwadebe ọrụ aka ma soro ntuziaka ụfọdụ iji mee kefir kefir.
Kefir mmiri, dị ka mmiri ara ehi kefir, nwere otu microflora. N'okwu a, kefir mmiri dị mfe ịme ebe ọ bụ na ịchọghị mmiri ara ehi akụrụ iji mee ya.
1 Kefir mmiri
2 Otu esi eme mmiri kefir
2.1 Akụrụngwa iji kwadebe ya
2.2 Akụrụngwa dị mkpa
2.3 Nkwadebe, site na nkwụsị
3 Njirimara nke mmiri kefir
Ọ bụrụ na ị na-ata ahụhụ mgbe niile na nsogbu ahụike, ị nwere ike ime kefir mmiri iji lekọta ahụike gị ma sie ike, na mgbakwunye, ịkwadebe kefir mmiri n'ụlọ dị mfe, naanị ị ga-enweta ọgwụ nje inwe ike ịnụ ụtọ mmiri a gbara mmiri.
Iji mee mmiri kefir, ị chọrọ ọka nke kefir, iji mee mmiri a drinkụ mmiri. A na-ejikọ ọka ndị a probiotics, microorganism nje dị elu nke na-ebikọ n'otu gburugburu. Nje bacteria ndị a nwere ike inyere anyị aka ịnọgide na-enwe ahụike na ihe nchebe siri ike karị.
Ndị a probiotics, bụ ezigbo nje bacteria dị na usoro digestiveHa dị mkpa maka mgbaze na maka nri na-abanye n'ọbara anyị, na mgbakwunye na ichebe anyị pụọ na ọrịa.
A na-echebe usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ ma nweta ume, ọ bụrụ na anyị adịghị ike, nwee mgbaze na-adịghị mma, ọgbụgbọ ma ọ bụ nsogbu mgbe ị na-aga ọrụ, rịba ama ma mụta ịrụ Kefir mmiriiji mee ka ahụ dịkwuo gị mma na dịkwa nro. Na mgbakwunye, ịnọgide na-edozi nri kwesịrị ekwesị ma na-emega ahụ oge niile.
Otu esi eme mmiri kefir
Nkwadebe nke ihe ọ drinkụ drinkụ a bụ mfe, ngwa ngwa ọ na-arụpụtakwa ezigbo ihe. Ọ chọrọ naanị oge ezumike na gbaa ụka gburugburu Awa 48.
Akụrụngwa iji kwadebe ya
Otu iko ite nke 1 lita.
A tablespoon nke osisi ma ọ bụ plastic ka ebido.
Acha akwa, akwa nhicha, ma ọ bụ kọfị dị ọcha iji kpuchie carafe.
Otu roba iji sonye na nzacha na ite mmiri.
Ihe nhicha rọba iji wepu mpekere ọka n'ime mmiri.
Ọka nke Kefiri mmiri.
Ọkara otu iko aja aja.
Nkwadebe, site na nkwụsị
Buru ụzọ tinye shuga n’ime iko ahụ. Add ọkara otu iko mmiri ọkụ ma nwuo ruo mgbe shuga ga-agbaze kpamkpam. Ekem tinye iko 3 nke mmiri na-ekpo ọkụ n’ime ụlọ, nke dị n’etiti ogo 20 na 29.
Tinye hydrated kefir grains ma kpuchie ya ite na kọfị nzacha ma ọ bụ jiri akwa nhicha ahụ. Nzọụkwụ a dị mkpa ka gbaa ụka na-emepụta gas na akwa na-adịghị mkpa maka gas ga-agbapụ nke ọma. Hapụ ite ahụ n’ebe dị mma ma hapụ ya ka ọ nọrọ ọdụ ruo ụbọchị abụọ.
N'otu oge, ọ na-fermented, ikewapụ grains nke kefir mmiri ma tinye ha na mmiri shuga ohuru. Ihe ọ drinkụ drinkụ ahụ ga-adị njikere iri.
Njirimara nke mmiri kefir
Ihe ọ drinkụ drinkụ a nwere mmiri nwere ihe ndị dị mkpa na-enyere anyị aka ịdị mma. Ọzọ anyị ga-agwa gị kedụ uru ọ thisụ thisụ a na-ewetara anyị, nke mere na ị kpebiri otu ụbọchị ị ga-eme ya n'ụlọ, ị ga-achọpụta na ahụ gị ga-aka mma karịa.
Na-echekwa a usoro nri gbasiri ike.
Ọ na-eme anyị obi ụtọ.
Na-enyere aka weghachi Osisi nri.
Ọ bara ọgaranya na nri dịka football, vitamin B12, magnesium na folic acid.
Dịkwuo anyị ihe nchebe.
Na-echekwa a dịghịzi usoro dị ike ma dị mma.
Kefir na-alụ ọgụ nje na-adịghị mma na eriri afọ.
Ọ na-eme dị ka antibacterial.
Na-enyere mgbaze lactose. Mee ka ndidi anyị na ngwaahịa mmiri ara ehi ma ọ bụrụ na anyị anaghị anagide ihe.
Na-ebelata ọgụ site na ụkwara ume ọkụ na mmeghachi omume nfụkasị.
Mma mgbaàmà nke ọrịa obi eriri afọ.
Meso ya afọ ntachi mgbe ụfọdụ.
Mee ka mma Usoro nchịkwa.
Mee ka ahụ ike ọkpụkpụ maka ọdịnaya ya dị elu na calcium.
Na-ebelata ọrụ nke mkpụrụ ndụ cancer.
Na-egbochi ọdịdị nke Ọrịa cancer.
na grains na kefir Ejila ha kemgbe ọtụtụ afọ iji mee ka ahụ na ahụ ike dị mma. Ọrụ nke ọgwụ nje ha na-enyere anyị aka inwe ọ goodụ. Dị ka ị hụworo, nkwadebe nke ihe ọ drinkụ drinkụ a dị nnọọ mfe, naanị na anyị ga-enweta mkpụrụ kefir ma hapụ ha ka ha gbaa ụka na mmiri.
You nwere ike ịkwadebe ihe ọ drinkụ drinkụ ahụ ọtụtụ oge ịchọrọ, ọ bụrụ na ọ dị gị ka ọ dị ntakịrị umengwụ na obere mgbaze n'oge oge, ị nwere ike ịhọrọ ịme ihe ọ drinkụ drinkụ a ma ọ bụ rie ngwaahịa ndị dị ka keg yogọt ma ọ bụ mmiri ara ehi kefir anyị nwere ike ịchọta Ahịa.
Egbula oge ma malite ị consumụ mmiri kefir emebere n'ụlọ taa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nutri Nri » Nri » Kefir mmiri
Asaa uru nke cherry tomato